काठमाडौँ, असोज २७ गते । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको अन्तिम नामावली टुङ्गो लगाउन काँग्रेस संसदीय समितिले गृहकार्य थालेको छ ।
७७ जिल्लामध्ये बिहीबारसम्ममा ७३ जिल्लाबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएर आए पनि धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी र मुस्ताङबाट सिफारिस आउन बाँकी रहेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले शुक्रबारसम्म उम्मेदवारको नामावली टुङ्गो लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
निर्वाचनका लागि पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताको नाम सिफारिस भएर आएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम डडेलधुरा १ बाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम तनहुँ १ र २ बाट सिफारिस भएको छ । महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला नवलपरासी–१ बाट, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव सिरहा–३ बाट सिफारिस हुनुभएको छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौँ–१ बाट, अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम झापा–३ बाट सिफारिस भएर आएको छ । गोपालमान श्रेष्ठ स्याङ्जा–२ बाट सिफारिस हुनुभएको छ भने धनुषाले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइनसकेकाले नेता विमलेन्द्र निधिको नाम आइसकेको छैन ।
पाका नेता कुलबहादुर गुरुङको नाम इलामबाट समानुपातिकमा सिफारिस भएको छ । त्यस्तै खुमबहादुर खड्काको नाम दाङ–१ बाट सिफारिस भए पनि कानुनी रूपमा उहाँ उम्मेदवार बन्न सक्नुहुनेछैन । चित्रलेखा यादवको नाम सिराह–२ बाट, सुर्खेत–१ बाट पूर्णबहादुर खड्काको नाम सिफारिस भएर आएको छ ।
नुवाकोटमा अर्जुननरसिंह केसी र डा. रामशरण महतको नाम सिफारिस भएको छ । मोरङको क्षेत्र नम्बर २ र ४ बाट डा. मीनेन्द्र रिजाल, मोरङ–६ बाट महेश आर्चायको नाम सिफारिस भएको छ । युवानेता गगन थापा काठमाडौँ–४ बाट निर्वाचन लड्ने बताइएको छ । यद्यपि उहाँले आफूलाई काठमाडौँ–३ मा टिकट दिए पनि हुने जानकारी पार्टीलाई दिनुभएको छ ।
निर्वाचनका लागि बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग तालमेलको तयारी गरिरहेको काँग्रेसलाई सबैलाई चित बुझाएर टिकट वितरण गर्न भने निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । “तालमेल सजिलो छैन तर हाम्री प्रयास गरिरहेका छौँ”, ती नेताको भनाइ छ ।